Osisi China na-atụgharị Single Axis One Spindle Lathe Machine maka ogidi steepụ Onye nrụpụta na onye na-ebubata |Apex
Igwe igwe na-atụgharị osisi CNC
Igwe nrịbama laser
Igwe Akpụkpọ anụ
Igwe eji egbutu eriri eriri/Plasma metal
Igwe eji egbutu akpụkpọ anụ / akpụkpọ anụ oscilating
Igwe ihe osise Laser
Akụkụ mapụtara, Ngwa & Ngwa
Nkwado na Ọrụ
Ọrịre na-ekpo ọkụ 3D 5 Axis Woodwork...
China CNC nrụpụta Shee ...
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ Jinan 3 Axis ...
1325 CNC rawụta osisi na-arụ ọrụ ...
Ịrụ ụlọ ọrụ ire ere Cu...
Ọnụ ụzọ osisi ire ọkụ na-eme M...
1390 CO2 Laser Engraver maka ...
APEX 1516 Otu Axis CNC Osisi ...
Jinan Single Axis CNC Osisi ...
Ogwe njikwa Single Axi...
Ụlọ ọrụ Jinan Hot ire akpaaka...
Osisi na-atụgharị Single Axis One Spindle Lathe Machine maka ogidi steepụ
APEX Cnc osisi na-atụgharị lathe Central igwe nwere mma abụọ axis anọ
APEX Brand cnc osisi lathe nwere dị iche iche ụdị, dị ka APEX15016, APEX15030, APEX20030, APEX30030etc.the size nwere ike ahaziri, anyị na-enye 2 afọ akwụkwọ ikike, dum ndụ oru nkwado.
Maka nkwado oge mbụ, anyị ga-enyere aka dozie nsogbu ndị dị n'okpuru ebe a, dị ka ịhọrọ igwe akụ na ụba ma dị elu, ụgwọ mbupu, mbubata ụtụ isi ụtụ isi, nsogbu mgbe ire ere, nkwado teknụzụ wdg.
Osisi na-atụgharị Single Axis One Spindle Lathe Machine maka ogidi steepụ, 4 axis ATC CNCosisi lathea na-eji ya eme ihe maka ntụgharị 3D na ịkpụ ogidi ndị Rome, ụkwụ tebụl, ụkwụ sofa, ụsụ baseball, ọkwá osisi, vases, wdg.
ATC CNC osisi lathe Atụmatụ
1. The osisi lathe adopts elu DSP usoro na USB njikọ, ejikwara na aka, adaba ọrụ.
2. A na-ejikọta igwe lathe dum na nhazi ígwè na-enweghị ihe ọ bụla, nke na-eme ka okpomọkụ dị elu na-eme ka ọ ghara ịdị na-ama jijiji, ya mere a na-eme ka anụ ahụ na-eme ka ọkpụkpụ sie ike na ọ gaghị emebi ruo mgbe ebighị ebi.
3. The ATC CNC osisi lathe adopts home top ika stepper moto iji hụ na elu nkenke.
4. Sistemụ arụmọrụ nwere interface ọrụ enyi dị mfe, aro bekee na usoro ntọala dị mfe.
5. Spindle System na-ekewa n'ime otu axial na biaxial.
6. Nbufe usoro adopts Hiwin square okporo ígwè na bọl ịghasa iji chịkwaa linear njehie nke ọma.
7. Otu oge ngwá ọrụ ntọala rụchaa dum workpiece.
8. Dakọtara na ọtụtụ CAD / CM imewe software dị ka Type3, Artcam, wdg.
9. The ATC osisi lathe nwere ike kpamkpam na-arụ ọrụ offline na adịghị ewere ọ bụla kọmputa akụrụngwa.
10. 4th axis maka ihe osise 3D na ịkpụ.
11. akpaka ngwá ọrụ mgbanwe usoro.
Ngwa ATC CNC Osisi Lathe
A na-eji ATC CNC lathe osisi nwere sistemu ihe na-agbanwe ngwa ngwa maka kọlụm roman, aka osisi, bat baseball, steepụ ọhụrụ steepụ, steepụ, steepụ steepụ, ụkwụ okpokoro ngwụcha, ụkwụ tebụl iri nri, ụkwụ tebụl sofa, ụkwụ oche, ụkwụ stool, Ogwe ogwe aka oche, ihe ndọtị oche, okporo ụzọ akwa, ụkwụ ukwu, mkpọ oriọna na ihe ndị ọzọ.
ATC CNC Osisi Lathe Nka nka
Nlereanya Ọnụahịa kasị elu nke 1530
Ogologo ntụgharị kachasị 100mm-2500mm
Dayameta ntụgharị kacha 20mm-300mm
Spindle 3.5KW ikuku jụrụ oyi spindle nwere moto
Ọnụọgụ nke axis Otu axis, agụba abụọ
Ọnụego nri kacha elu 200cm/min
Spindle ọsọ 0-3000r/min
Ngalaba ntọala kacha nta 0.01cm
Usoro njikwa Onye njikwa panel
Sistemụ ịnya ụgbọ ala Stepper moto
Ịnye ọkụ AC 220V / 60hZ
Oriri ike dum 5,5kw
N'ozuzu akụkụ 4100*1500*1300mm
Nkọwa ATC CNC Osisi Lathe
ATC CNC Osisi Lathe Projects
Mbupu Mba Nile Gburugburu Ụwa
Enwere ike ibuga ndị na-anya CNC niile n'ụwa niile site n'oké osimiri, ikuku ma ọ bụ site na ngwa ngwa ngwa ngwa mba ụwa site na DHL, FEDEX, UPS.A na-anabata gị ka ị nweta nkwuputa n'efu site n'imejupụta ụdị ahụ na aha, email, adreesị zuru ezu, ngwaahịa na ihe achọrọ, anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya ozi zuru ezu gụnyere usoro nnyefe kachasị mma (ngwa ngwa, nchekwa, akọ) na ibu.
Nke gara aga: Jinan Factory Production Line Galvo Fiber Laser Printer Machine maka PVC PE Pipe
Osote: Igwe ihe eji akpụ osisi CNC Router acrylic Cutting Sign arịa ụlọ
osisi cnc lathe
osisi cnc na-atụgharị lathe
Osisi Detuo Lathe
osisi na-atụgharị cnc lathe
cnc lathe na-arụ ọrụ osisi
2021 ọhụrụ imewe Nesting CNC Router maka Cabinet ...
Ngwakọ CO2 Laser Cutter maka igwe na osisi
CO2 JPT Laser Tube 30W Laser Marking Machine
APEX CNC Router Multi-heads 3D nwere Spindles iri na abụọ ...
Igwe ihe osise 3D Crystal Laser dị elu
4 isi CNC Woodworking rawụta Machine maka 3D C ...